यो नी सुक्खा हुने समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ ठिक पार्ने उपाय – Jagaran Nepal
यो नी सुक्खा हुने समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ ठिक पार्ने उपाय
महिलाहरूमा यो नी सुखा हुने एउटा सामान्य कुरा हो । यद्यपि यो यौ न सम्पर्कको समयमा भने कुनै पनि महिलाको लागि निराशाको विषय हो। साथै, यदि तपाईं यस्तो अवस्थामा सेक्स गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले धेरै पीडा महसुस गर्नुपर्नेछ।
तपाईं यस अवस्थालाई लोशन वा केही औषधिको प्रयोगले निको पार्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं यसलाई प्राकृतिक तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहनु हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई केही टिप्स दिँदै छौँ । जसले तपाईलाई उक्त अवस्थाबाट छुटकारा दिनेछ ।
पानीयुक्त फलहरू खाऊ
तपाईंको यो नी सुक्खा हुने समस्याबाट गुज्रँदै हुनुहुन्छ भने तपाइँले त्यस्ता फलहरू लिनुपर्दछ जसले तपाईको शरीरलाई बढी पानी दिन्छ।
धेरै व्यक्तिहरूले धेरै पानी पिउन सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले फलफूल खानु पर्छ जसले अधिक पानी दिन्छ। यी फलहरुमा तरबूजा, खरबूजा, अनार, अंगूर जस्ता फलहरु सामेल छन्। यी फलहरूमा ९० प्रतिशत पानी हुन्छ। यदि महिलाले आफ्नो दैनिक तालिकामा राख्नुभयो भने तपाई सुख्खा योनी जस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। साधारणतया, तपाइँ सकेसम्म हाइड्रेटेड रहनु पर्छ।
जैतुनको तेल प्रयोग गर्ने
जैतुनको तेलमा राम्रो किसिमको चिलोपना हुन्छ । जुन धेरै फाइदाजनक छ। विशेष गरी योनी सुक्खा हुने महिलाका लागि यो निक्कै उपयोगी हुने गर्छ। जैतुनको तेलले तपाईंको योनीलाई हाइड्रेट राख्छ। यदि तपाईं आफ्नो शरीरलाई हाइड्रेट राख्न चाहनुहुन्छ भने जैतुनको तेल प्रयोग गर्नु राम्रो हो। जैतुनको तेलमा एक प्राकृतिक चिप्लोपना छ, जसले तपाईंलाई राम्रो चिल्लोपना दिन मद्दत गर्दछ।
एभोकाडोको प्रयोग गर्नुहोस्
एभोकाडो खानु तपाईंको छालाको लागि धेरै फाइदाजनक छ। एभोकाडोमा भिटामिन ई पाइन्छ। साथै, यसले स्वस्थ चिल्लोपना पनि प्रदान गर्दछ । तपाईंको शरीरलाई लचिलो पनि राख्नेछ । यसले तपाईंलाई हाइड्रेटेड पनि राख्दछ। यस फलको सेवन गरेर तपाई योनी सुक्खाको समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
सूर्यमुखी र तिलको दाना
सूर्यमुखी फूल र तिलको दाना खानु राम्रो हुनेछ । तपाईं यसलाई सलादमा राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ। विशेष रुपमा सूर्यमुखी र तिलको दानामा बोसिय एसिडहरू हुन्छन्, जुन तपाईंको योनीको लागि राम्रो मानिन्छ। यसको सेवनले तपाईंको छाला नरम रहन्छ र एकै समयमा तपाईंको शरीरको आवश्यकता अनुसार सहजता आउँदछ। ओमेगा ३ प्राप्त हुने पदार्थहरूले सुख्खापनको समस्याबाट मुक्त गर्दछ। धेरै डाक्टरहरूले पनि यो खाने सल्लाह दिन्छन्। तपाईंले त्यसलाई खानाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ, जसले तपाईंको शरीरलाई हाइड्रेट राख्दछ।
सम्पूर्ण अनाजको सेवन
सबैखाले अन्नले पनि सुख्खापनको गुनासो हटाउँछ। जस्तो कि तपाईं खैरो चामल खान सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई फाइबर दिन्छ। खैरो चामलमा फाइबर हुन्छ जुन यस अवस्थामा मानिसका लागि राम्रो मानिन्छ। यस तरिकाले तपाईं आफ्नो हर्मोनहरूलाई सन्तुलित राख्न सक्षम हुनुहुनेछ। किनभने यदि हर्मोन सन्तुलित छैन भने तपाईंमा योनी सुख्खापनको समस्या हुन सक्छ ।
दहीमा धेरै स्वस्थ ब्याक्टेरिया हुन्छन् जुन शरीरको लागि राम्रो मानिन्छ। दहीले योनी भित्रको पीएच स्तर सामान्य राख्छ। दही सेवन गर्नाले महिलाको धेरै योनी सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ, यसको सेवन निक्कै महत्वपूर्ण हुन्छ ।